Coronavirus outbreak: All the latest updates - Weblife24 News
Home /Coronavirus outbreak: All the latest updates
The agency also reported 327 new confirmed cases during the same period, down from 433 on Wednesday, raising the total number of infections to 78,824.
Meanwhile, South Korea reported 256 new coronavirus cases on Friday, bringing the total number of infected in the country to 2,022.
In the United States, public health officials were retracing the steps of a Northern California woman on Thursday believed to be the first person in the US to contract the highly contagious coronavirus without having travelled internationally, or coming into close contact with anyone who had.
Lithuania’s government has reported on Friday the country’s first confirmed case of coronavirus, as the disease continues to spread rapidly worldwide.
K-pop group BTS cancel concerts over coronavirus scare
Nigeria reports first case of coronavirus in sub-Saharan Africa
Nigeria has reported on Friday that a coronavirus case was detected in the country – the first in the sub-Saharan African region.
South Korea reports 256 new coronavirus cases, total 2,022 – KCDC